कस्तो साथीको संगत गरियो भने सफलता पाइन्छ ? यी हुन् घतलाग्दा तथ्य – mYKantipur.Com
२०७५, १५ असार शुक्रबार ११:३०
नेपाली समाजमा भनाई नै छ, ‘संगत गुनाको फल ।’ जस्तो संगत गरिन्छ, त्यस्तै भइन्छ । अर्को घतलाग्दो पंक्ति छ, ‘असल मान्छेको संगतले फाइदा गर्छ । हावा जब फूलबाट गुज्रन्छ, सुविासित हुन्छ ।’
को सत्रु, को मित्र ?
कस्ता साथीलाई विश्वास गर्ने ?
त्यसो गर्न नमानेको खण्डमा साथीलाई नै छाड्न समेत हिच्किचाउनु हुँदैन । जसलाई हितैषी, सत्यवादी, आपतविपतमा साथ दिने, गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने मित्रको साथ मिल्छ त्यस्ताको जीवन अवश्यमेव सुखी हुन्छ । अनि उसैको जीवन सफल पनि हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने महाभारत भन्छ- इमान्दार मानिस ईश्वरको सर्वोत्कृष्ट कृति हो ।
२०७५ असार १५ गते १०:५१ मा प्रकाशित
भेनेजुएलामा राजनीतिक संकटः अमेरिकासँगको गोप्य वार्तामा के–के कुराकानी भयो ? |